राष्ट्रसंघमा भ्रष्टाचारको आरोपमा चिनियाँ अर्बपतिलाई चार वर्षको कैद
२०७५ बैशाख ३० आइतबार, एजेन्सी। चिनियाँ अर्बपति एनजी लेप्सेङलाई चार वर्षको कैदैको फैसला सुनाइएको छ। राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएको कारण उनलाई अमेरिकाको संघीय अदालतले चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो। ... बाँकी अंश»
पहिलो स्वदेशी पानीजहाजको परीक्षण गर्दै चीन
२०७५ बैशाख ३० आइतबार, एजेन्सी। चीनमै बनेको पहिलो पानीजहाज परीक्षणको लागि समुद्रमा पठाइएको छ। आइतबार चीनले आफ्नै मुलुकमा बनाइएको पानीजहाजको परीक्षण सुरु गरेको हो। चीनको आधिकारिक सञ्चारमाध्यमले दिएको जानकारीअनुसार यसअघि नै चीनमा बनेको ... बाँकी अंश»
पेरिसमा आतंककारी आक्रमण, आईएसले लियो जिम्मेवारी
२०७५ बैशाख ३० आइतबार, एजेन्सी। फ्रान्समा शनिबार राति भएको अतंककारी चक्कु आक्रमणबाट एक जनाको ज्यान गएको छ भने थप चार जना मानिसहरु घाइते भएका छन्। फ्रान्सका अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार ओपोरा जिल्लामा प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा आक्रमणकारीको ज्यान गरेको छ। ... बाँकी अंश»
ब्रेजिक्टलाई छ महिना पर धकेल्दै युरोपियन युनियन
२०७५ बैशाख ३० आइतबार, एजेन्सी। युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेजिक्ट) को अवधिमा छ महिना बढ्नसक्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ। इन्डिपेन्डेन्टले बताएअनुसार अहिले ईयूका अधिकारीहरु यो अवधिलाई छ महिना पर सार्ने योजनामा देखिएका हुन्। ... बाँकी अंश»
इरान सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णयसँगै अमेरिकाका न्युक्लियरविद्ले दिए राजीनामा
२०७५ बैशाख ३० आइतबार, वासिङटन। अमेरिकाको स्टेट डिपार्टका वरिष्ठ न्युक्लियरविद्ले इरान सम्झोताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरेसँगै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। इरानको न्युक्लियर मुद्दाको सहायक कोर्डिनेटरको रुपमा काम गरिसकेका रिचार्ड जोनसोनले राजीनामा दिने निर्णय गरेका हुन्। ... बाँकी अंश»
२०७५ बैशाख २९ शनिबार, बेरूत, लेबनान। यस हप्ता सिरियामा भएका इजरायली आक्रमणमा परी कम्तीमा ४२ जनाको मृत्यु भएको सिरियाली युद्ध अनुगमन समूहले शनिबार बताएको छ। बेलायतस्थित सिरियाली मानव अधिकार अनुगमन समूहले भनेको छ, इजरायलले बिहीबार बिहानैदेखि आक्रमण शुरू गरेको थियो। आक्रमणबाट ११ इरानी, छ सिरियाली सेनासहित २७ जनाको मृत्यु भएको छ ... बाँकी अंश»
२०७५ बैशाख २९ शनिबार, सोल, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरियाले आणविक हतियार परीक्षणस्थललाई नष्ट गर्न ‘प्राविधिक उपायलाई अघि बढाउन लागेको’कोरियाली केन्द्रीय सामाचार संस्था केसिएनए न्यूज एजेन्सीले शनिबार जनाएको छ। ... बाँकी अंश»
अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई सघाउने
२०७५ बैशाख २९ शनिबार, वासिङटन। आफ्ना पारमाणविक अस्त्रहरू परित्याग गर्न उत्तर कोरिया सहमत भएमा अमेरिकाले उत्तर कोरियाली अर्थतन्त्रको पुनःविकासमा सघाउने भएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले यस कार्यमा दक्षिण कोरियाले पनि सघाउने जानकारी दिनुभएको समाचारमा जनाइएको छ। ... बाँकी अंश»
२०७५ बैशाख २९ शनिबार, काठमाडौं। गएको मे ७ मा भ्लादिमिर पुटिनले रुसको राष्ट्रपति पदमा चौथो कार्यकालको लागि सपथ लिएका छन्। उनले गत मार्च १९ मा रुसको राष्ट्रपति पदमा पुनः निर्वाचित भएका थिए। ... बाँकी अंश»
आज अन्तराष्ट्रिय नर्स दिवस, फ्लोरेन्स नाइटिंगेलको सम्झनामा विश्वभर मनाइदै
२०७५ बैशाख २९ शनिबार, काठमाडौं। हरेक वर्षको मे १२ मा विश्व नर्स दिवस मनाइदैछ। फ्लोरेन्स नाइटिंगेलको जन्म दिनका अवसरमा आज विश्वले अन्तराष्ट्रिय नर्स दिवस मनाँउदैछन। नेपालमा पनि बिभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिबस मनाउने गरिएको छ। ... बाँकी अंश»
भारतको औरंगावादमा दुई समुदायबीच झडप
२०७५ बैशाख २९ शनिबार, औरंगावाद । भारतको महाराष्ट्र प्रान्तको औरंगावादमा शुक्रबार राती दुई समुदायको बीचमा भएको झडपमा परी दुई जनाको ज्यान गएको छ भने ४१ जना मानिसहरु घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरुमा १६ जना सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ बैशाख २९ शनिबार, क्वालालम्पुर। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नाजिब रजाकलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मलेसियाको आप्रवासन विभागले भर्खरै मात्र सत्ताबाट बाहिरिनु भएका पूर्वप्रधानमन्त्री रजाकलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाइएको शनिबार जानकारी दिएको हो। ... बाँकी अंश»
किन ढल्दैन शक्तिशाली भूकम्पमा पनि पिसाको लिनिङ टावर ?
२०७५ बैशाख २९ शनिबार, लण्डन । इटालीको प्रसिद्ध पिसाको लिनिङ टावरले अहिलेसम्म धेरै शक्तिशाली भूकम्पको सामना गरिसकेको छ तर अहिलेसम्म यो टावर अलिकति पनि चर्किएको छैन । ... बाँकी अंश»
अमेरिकाको यस किसिमको व्यवहार सहन सकिदैन : फ्रान्स
२०७५ बैशाख २९ शनिबार, एजेन्सी। अमेरिकाले गरेको इरानमाथिको प्रतिबन्धको निर्णयमा फ्रान्सले आपत्ति प्रकट गरेको छ। फ्रान्सले यस किसिमको व्यवहार सहन नसकिने भन्दै यो निर्णयमा आपत्ति प्रकट गरेको हो। छ जना इरानी व्यवसायीहरु र तीन कम्पनीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाले निर्णय गरेसँगै फ्रान्सले यस्तो जवाफ फर्काएको हो। ... बाँकी अंश»
बिजुलीको बिलका कारण भारतीय नागरिकले गरे आत्महत्या
२०७५ बैशाख २९ शनिबार, महाराष्ट्र । एक भारतीय तरकारी बिक्रेताले बिजुलीको महसुल अत्यधिक आएको भन्दै आत्महत्या गरेका छन् । भारतको महाराष्ट्रका ३६ वर्षीय जगन्नाथ शेल्केले बिजुलीको महसुल आठ लाख ६४ हजार भारु आएको पाइएपछि आत्महत्या गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
के फर्किएला त एमडीबीमा हराएको पैसा ? के हो एमडीबी ?
२०७५ बैशाख २९ शनिबार, काठमाडौं । मलेसियाका नयाँ प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले मलेसियाको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको एमडीबीको अधिकांश पैसा फिर्ता हुने बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
उत्तर कोरियालाई अमेरिकाको प्रस्तावः परमाणु हतियार त्यागे पुनर्संरचनामा सघाउने
२०७५ बैशाख २९ शनिबार, काठमाडौं । अमेरिकाले उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्रमा सुधारको लागि सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ । अमेरिकाले यदि उत्तर कोरियाले परमाणु हतियारको कार्यक्रम त्याग गरेको खण्डमा उसको आर्थिक सुधारको लागि सहयोग गर्न सकिने बताएको हो । ... बाँकी अंश»
पाकिस्तानद्वारा अमेरिकी कुटनीतिज्ञमाथि भ्रमण प्रतिबन्ध : विदेश मन्त्रालय
२०७५ बैशाख २८ शुक्रबार, इश्लामावाद, पाकिस्तान। अमेरिकी कुटनीतिज्ञलाई पाकिस्तान भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार जनाएको छ। अमेरिकाले पनि पाकिस्तानमाथि यसै प्रकारको प्रतिबन्धको घोषणा गरिसकेको छ। ... बाँकी अंश»
मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिरको मन्त्रिमण्डल विस्तार
२०७५ बैशाख २८ शुक्रबार, क्वालालम्पुर। बिहीबार नियुक्ति हुनुभएका मलेसियाका प्रधानमन्त्री माहाथिर मोहमदले शुक्रबार दश जना नयाँ मन्त्री थपेका छन्। उनले विपक्षी गठबन्धनको समर्थनमा बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका हुन्। उनले पहिलो पटक तत्काल नियुक्ति गनुपर्ने मन्त्रीहरुको नामावली हिजो नै दिएको र शुक्रबार उक्त मन्त्रिमण्डलमा विस्तार गरेको हो। ... बाँकी अंश»